ငါးဘတ်ငါးဆားနယ်ချက် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ငါးဘတ်အသား............. ၄၀ ကျပ်သား
ခရမ်းချဉ်သီး.....................၅ လုံး ( ပါးပါးလှီး)
နနွင်းမှုန်. + အရောင်တင်မှုန်. .အနည်းငယ်စီ
ဆား...............................၁ ဇွန်း ( ထမင်းစားဇွန်း)
ငါးဘတ်သားတွေကို ၁ လက္မအရွယ်လောက်တုံးပြီးဆားဇွန်း၃ဇွန်းခန်.
ဖြင့်နယ်ပြီးပလပ်စတစ် ၃-၄ ထပ်လောက်လေလုံအောင်ထုပ်ကာ(၃) ရက်
ဟင်းချက်တော့မယ်ဆိုရင်...ကြက်သွန်နီ ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ငရုတ်သီးခြောက်တောင့်တွေကိုညှက်နေအောင်
ထားပါ။ ဒီလိုဆားနယ်ထားခြင်းက ငါးအသားကို တင်းစေပြီးချက်တဲ့အခါ
ဒယ်အိုးတစ်လုံးမှာ..ထောင်းထားသောကြက်သွန်၊ ငရုတ်သီး၊ နနွင်းမှုန်.၊
အရောင်တင်မှုန်.၊ လက်ကျန်ဆား၊ ပာင်းခတ်မှုန်.တို.ကိုအောက်ဆုံးမှ
ပါးပါးလှီးထားသောခရမ်းချဉ်သီးများဖြင့် ဖုံးအုပ်ပြီးပါက ဆီ၂ ဇွန်းခန်.ထည့်
ဖွင့်ကြည့်စရာမလို ၊ မွှေပေးစရာမလိုလောက်တဲ့..မီးအေးအေးမှာအဖုံးပိတ်
(၁၀) မိနစ်လောက်ကြာလာလျှင်ရေခမ်းပြီးအနှစ်ကျလာသလို ဆီလည်းပြန်
လာပါလိမ့်မည်။ ထိုအချိန်မှ..ရေဆေးထားတဲ့ငါးအသားတွေကို ပေါင်းထည့်
( မငံပဲ သိပ်စားလို.ကောင်းပါတယ်...ခုလို..အတို.အမြှုပ်အစုံနဲ.စား )..တွဲဖက်